tag: စျေးဝယ်ခြင်း Martech Zone
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, အောက်တိုဘာလ 20, 2021 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, အောက်တိုဘာလ 20, 2021 Thea C. Myhrvold
တစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းလက်လီအရောင်းဆိုင်များသည်ကူးစက်ရောဂါ၏သက်ရောက်မှုကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့ပြီး ၂၀၂၁ တွင်စျေးကွက်သည်နောက်ထပ်စိန်ခေါ်သောအားလပ်ရက်စျေးတစ်ခုနှင့်ရင်ဆိုင်ရဖွယ်ရှိသည်။ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ပြတ်တောက်မှုများသည်စာရင်းသိုလှောင်နိုင်စွမ်းကိုဆက်လက်ထိခိုက်စေသည်။ ယုံကြည်စိတ်ချစွာမှာယူနိုင်ပါသည်။ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည်ဖောက်သည်များဆိုင်အတွင်းလာရောက်လည်ပတ်ခြင်းကိုဆက်လက်တားမြစ်သည်။ လုပ်သားရှားပါးမှုသည်စားသုံးသူများကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်စျေးဆိုင်များကိုနှောင့်ယှက်စေသည်
ငါအဲဒီမှာဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာမင်းမြင်သလား။ ဤသည်အနောက်မြောက်ပိုင်းအနောက်တိုင်းသားသည်အပြုအမူထက်ဗြိတိသျှစာလုံးပေါင်းအပြုအမူကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်မည်မျှလောကီရှိသည်ကိုလူတိုင်းအားသက်သေပြချင်သည်။ သို့မဟုတ်မရ။ ကျွန်တော့်အမေဘက်ခြမ်းရှိစကော့တလန်နှင့်ဗြိတိသျှအမွေအနှစ်များရှိလင့်ကစားယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းသို့ကျွန်ုပ်လုံးဝရောက်ဖူးခြင်းမဟုတ်ပါ။ (ကြည့်ပါ။ ငါထပ်လုပ်ပြန်သည်!) အိုကေ၊ ဟာသဘေးဖယ်။ (ဒါ!!)၊ ဤသည် CM အမှတ်တံဆိပ်မှသိမ်းယူထားသောသတင်းအချက်အလက်အချို့ဖြစ်သည်။ ငါတကယ်ဒါကယုံကြည်ကြသည်
၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်အကောင်အထည်ဖော်မည့်သင်မြင်တွေ့ရမည့်အီလက်ထရွန်နစ်စီးပွားရေးလမ်းကြောင်း ၁၀ ခု
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 1, 2017 ကြာသပတေးနေ့၊ ဖေဖော်ဝါရီလ 2, 2017 Douglas Karr
၀ ယ်ယူရန်သုံးစွဲသူများသည်၎င်းတို့၏အကြွေးဝယ်ကဒ်ဒေတာကိုအွန်လိုင်းတွင် ၀ င်ရောက်ရန်အလွန်အဆင်ပြေခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ သူတို့ကဒီ site ကိုသူတို့မယုံဘူး၊ စတိုးဆိုင်ကိုမယုံဘူး၊ ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးကိုသူတို့မယုံကြည်ကြဘူး၊ ဘာမှမယုံကြည်ဘူး။ သို့သော်နှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ပျမ်းမျှစားသုံးသူသည်သူတို့၏ ၀ ယ်ယူမှု၏ထက်ဝက်ကျော်ကိုအွန်လိုင်းပေါ်တွင်ပြုလုပ်နေသည်။ ဝယ်ယူရေးလှုပ်ရှားမှုများ၊ မယုံနိုင်လောက်အောင်အီလက်ထရွန်နစ်စီးပွားရေးပလက်ဖောင်းများရွေးချယ်ခြင်း၊ မရေမတွက်နိုင်အောင်ဖြန့်ဖြူးသောနေရာများနှင့်အတူ
ကြာသပတေးနေ့, စက်တင်ဘာလ 10, 2015 ကြာသပတေးနေ့, စက်တင်ဘာလ 10, 2015 Venkat Viswanathan ဖြစ်သည်
ယနေ့ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်လက်လီရောင်းဝယ်မှုနေရာတွင်စားသုံးသူများ၏အာရုံကိုဖမ်းစားရန်အတွက်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသောကမ်းလှမ်းမှုများသည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များကိုကွဲပြားခြားနားစေသည်။ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှကုမ္ပဏီများသည်သစ္စာစောင့်သိမှုကိုတည်ဆောက်ရန်နှင့်နောက်ဆုံးတွင်အရောင်းမြှင့်တင်ရန်အတွက်အမှတ်တရဖြစ်သောကိုယ်ပိုင်ဖောက်သည်များအတွေ့အကြုံကိုပေးစွမ်းရန်ကြိုးစားနေကြသည်။ သို့သော်ပြောရန်မှာပိုမိုလွယ်ကူသည်။ ဤသို့သောအတွေ့အကြုံမျိုးကိုဖန်တီးရန်သင့်ဖောက်သည်များအကြောင်းလေ့လာရန်၊ ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ရန်နှင့်မည်သည့်ကမ်းလှမ်းမှုများကိုစိတ်ဝင်စားရန်နှင့်မည်သည့်အချိန်တွင်သိရှိရန်အတွက်ကိရိယာများလိုအပ်သည်။ အညီအမျှအရေးကြီးသည်မှာသိခြင်းဖြစ်သည်
တနင်္ဂနွေ, မေလ 25, 2014 စနေနေ့, မေလ 24, 2014 Douglas Karr
လက်လီအရောင်းသည်လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲနေသည် - အွန်လိုင်းရောအော့ဖ်လိုင်းပါ။ ထုံးတမ်းအစဉ်အလာအရလက်လီကုမ္ပဏီများသည်အမြဲတမ်းအမြတ်အစွန်းနည်းပါးမှုနှင့်၎င်းတို့ရှင်သန်ရပ်တည်ရန်လိုအပ်သောစီးပွားရေးရလဒ်များကိုထုတ်လုပ်ရန်ပမာဏများစွာရှိကြသည်။ ယနေ့ခေတ်လက်လီအရောင်းဆိုင်များတွင်နည်းပညာတိုးတက်မှုနှင့်အရှိန်အဟုန်မြှင့ ်၍ တိုးတက်လာမှုများကိုလျင်မြန်စွာတွေ့မြင်နေရသည်။ အားသာချက်ကိုမယူသောလက်လီကုမ္ပဏီများသည်သေဆုံးလျက်ရှိသည်။ သို့သော်နည်းပညာကိုအရှိန်မြှင့်နေသောလက်လီရောင်းချသူများကစျေးကွက်ကိုပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ လူ ဦး ရေအချိုးအစားပြောင်းလဲခြင်း၊ နည်းပညာတော်လှန်ရေးနှင့်လူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ပိုမိုစားသုံးသူဝယ်လိုအား